Yedivayisi ekwelapheni waphuka yasungulwa udokotela Ilizarov (Elizarov). Idivayisi senziwa rod ezine zixhunywe amasongo amabili lapho uvalwe spokes tensioned sawela bodwa. Ngisho nasezikhathini zasendulo abaseGibhithe iboshelwe isayithi ukwa namahlamvu esundu, futhi kamuva wabonakala ukhonkolo. Khona-ke kwabe sekulandela inkathi osteosynthesis, lapho ithambo ushayela izinaliti noma izikhonkwane, abethela wire eziphukile, izingcwecwe zensimbi ezilula, emapheshana nezikulufi. Nokho, zonke izindlela kwakungafanele ngempumelelo ngoba unganikezi nenkanuko edlulele elukhuni bhasi.
Phuma kuzo isimo wathola udokotela izwe Ilizarov (Elizarov). Idivayisi ekuqaleni ukuklanywa ezivamile ukunitha izinaliti ngawo udokotela ukuzama esibhedlela yasemakhaya. Kudivayisi yakhelwe ukuze kwethambo abamhlaba metal spokes, walubeka engeli kwesokudla. Basuke uvalwe welulela abethela emasongweni omabili axhunyiwe ngu izinduku ezine, okuvumela ukuba silungise izingcezwana ngakho ngokuqinile ukuthi isiguli ukuvuka ngosuku lwesibili ngemva kokuhlinzwa. Obala ukwelashwa inzuzo esikunika Ilizarov (Elizarov), - idivayisi kusiza isiguli ukuhamba, ukuze imisipha ukusebenza, isikhumba ukuphefumula kwegazi is esisebenza kahle. ngaleyo ndlela Iziguli liyobuyiselwa ngokushesha izikhathi ezimbili kuya kwemithathu. Kokucindezela ithambo kokucindezelwa indlela kulekelelwa ngokungabi yisiphazamiso noma ngilulekela. Elizarova apharathasi umsebenzi yenzeka lapho wenziwa ngaphansi izinzwa jikelele noma umgogodla futhi ngokuvamile sihamba ngaphandle eziyingozi, ivumela esisuka izingcezwana kancane milimitha ngosuku, uyephuza ukuba isikhala esiphakathi kwawo egcwele amathambo imfuyo, okusho. E. ithambo angase ehlanganisiwe.
Bone ukuvuselelwa amakhono ephakeme kunaleyo nezinye izicubu zomzimba. New ithambo izicubu kungaba esihlukile ubudala kuphela ngokwenza ukuhlaziywa histological. Ukuqedwa amaningi esitho azalwa naso ukukhubazeka futhi ube sibonga ngokoqobo kudivayisi, okuyinto inikezwa Ilizarov (Elizarov). Idivayisi ingenisa kalula, inqubo cishe ngaphandle kwegazi.
Ziningi models imoto, ikhumbula ukuthi umuntu has a lot of amathambo ezinkulu kanye nezincane, amalunga omzimba, futhi kungalimala ezindaweni ezahlukene. Lokhu kuchaza iqiniso lokuthi imithi oyinikiwe kukhona yezinkinga ezihlukahlukene, ngakho indlela kumele kube ngokuqinile ngamunye. Kuyefana nasendleleni kwasekuzalweni, okuyizinto kakhulu. zokugula ngalinye - kuyinhlekelele ethile.
Futhi kubalulekile ukunquma indlela esifaneleka kunazo zonke, elula futhi ephumelelayo ukwelashwa, ukukhetha imodeli kwesokudla futhi ukuklama indlela elungile kakhulu ukukhanya kulandzelana nekuhlunga tinsita. Izindleko Elizarova kudivayisi (Ilizarov) kuncike ukumiswa kanye nendawo ukwa. Ngokuvamile, lena ithuluzi kungaxoxwa ukuthi kuyinto emnyangweni impahla sezisulu esibhedlela. zesimanje idivayisi athé ukwehluka imodeli kuqala. UDkt Ilizarov abangu obumbene ISIZINDA. Idivayisi iyafana umklami nezinga lezingane inombolo encane izingxenye ngabanye. izinhlobo eziningi of Ilizarov Uhlaka kungenziwa wabuthela kusuka eqoqweni ezithile izindandatho uhhafu nama-rod. Konke kuncike esimweni ngabanye kanye nobuchwepheshe likadokotela, okuyinto ukwelapha waphuka.
Yini yokubhalisa ezinhle Ukuvakashela somshado
Usimende Aluminous: Ukwakheka, izici, isicelo
Inhlawulo nepropusk ingakenzeki endaweni onqamula kuwo uhamba ngezinyawo
Izandla kusuka ku-foam ekhulayo-ukudala engcebeni yasensimu